သံမဏိပင်လယ်စာခြောက်စက်ထုတ်လုပ်သူ DPPG150s-x Tsix | Twesix
Tsix မှငါးခြောက်စက်ကိုလေထုအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက်အပူပိုင်းစက်အဖြစ်ခေါ်ယူပြီးခြောက်သွေ့သောငါးများသို့သဘာဝလေကြောင်းလိုင်းများကိုတုပသည့်သဘာဝလေကြောင်းလိုင်းများကိုတုပသည်။ ပရိုတိန်း, ရေနံနှင့်အဆီကဲ့သို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်အပူချိန်မြင့်မားခြင်းကြောင့်အလွန်အမင်းပျက်စီးစေပြီးအစိုဓာတ်ကိုဖယ်ရှားရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ငါးခြောက်စက်အနေဖြင့်ငါးခြောက်၏အရည်အသွေးနှင့်အာဟာရကိုအာမခံချက်ဖြင့်အာမခံသည်။ Tsix ရေအေးငါးခြောက်စက်သည် 25-75 ဒီဂရီ C လေထုကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ, ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားကိုဆက်သွယ်ပါ။
အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း - Twsix Seafood Dryer သည်အလုပ်သမားများစုဆောင်းခြင်း, သင်၏ပင်လယ်စာကိုခြောက်သွေ့စေရန်အတွက်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Twsix Seafood Dryer သည်အလုပ်သမားများစုဆောင်းသည့်ပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သည်။ သင်ဤစက်ကိုစနိုင်ပြီးသင်၏0န်ထမ်းများကိုအခြားအလုပ်များလုပ်နိုင်သည်။ ခြောက်သွေ့သောအပြီးသတ်ပြီးနောက်စက်သည်အလိုအလျောက်ရပ်တန့်သွားမည်
အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေး - Twsix Seafood Dryer ၏အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်သည်သင်၏ပင်လယ်စာကိုစွမ်းအင်နည်းစေနိုင်သည်။
dehumidifier - ရေစင်မြင့်၏သက်တမ်းကိုရေကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အစားအစာအရသာကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ပင်လယ်စာထုတ်ကုန်များကိုတိုးချဲ့ရန်ထိရောက်သောနှင့်ချွေတာသောဖြေရှင်းချက်။ Twsix Seafood Dryer သည်သင်၏ပင်လယ်စာကိုခြောက်သွေ့စေရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် dehumidifier နှင့်အစားအစာချွေတာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးခြောက်သွေ့သောစက်ဖြစ်သည်။
Cutttlefish သည် laparotomy မတိုင်မီအရွယ်အစားနှင့်လတ်ဆတ်မှုအရရွေးချယ်ထားပြီး,
အမြီး gland ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုမီ, ဝမ်းဗိုက်လက်လီးယားသို့လှည့်ပတ်ခြင်းမပြုမီဝမ်းဗိုက်ကိုင်ထားခြင်း, ဂလင်းအပေါက်ကိုဖြတ်တောက်ချိန်တွင်လက်ကိုင်ကိုလျှော့ချသင့်သည်။ ဝမ်းဗိုက်အခေါင်းပေါက်ကွဲပြီးနောက်ခေါင်းနှင့်လည်ပင်းကိုဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းကိုဖြောင့်စေပြီးခွဲစိတ်မှုသည်ခေါင်းကိုလက်ကောက်ဝတ်အလယ်သို့တိုက်ရိုက်ဖြတ်တောက်သည်။ ငါးများကိုဖြတ်တောက်သောအခါဓားအစွန်းကိုလက်ဝဲဘက်ဒ်သည်လက်ဝဲဘက်နှင့်မှန်ကန်တဲ့အရာတစ်ခု, ပါးစပ်နှင့် Esophagus အကြားအဆစ်သည် Viscera ကိုခြောက်သွေ့စေရန်နှင့်ဖယ်ရှားရန်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် transverse ဓားဖြင့်ဖြတ်တောက်သည်။ ဓားအစွန်းကိုဖြောင့်အောင်လက်ဝဲနှင့်လက်ျာအချိုးကျကိုဖြတ်တောက်ပါ။ အကွာအဝေးအနည်းငယ်သာထားရန်ပန်းဂလင်းအပေါက်ကိုပထမဆုံးဓါးဖြတ်တောက်ပါ။
Ink sac gland ကိုမသွားမီ Ink SAC ကိုမသွားမီ Onk sac gland ကိုညင်ညင်သာသာဆွဲထုတ်ပါ။ အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်အလှအပ။ Viscera ကိုဖယ်ရှားသောအခါအမြီးအဆုံး, ဦး ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီး ဦး ခေါင်းကိုမျက်ရည်များနှင့်ကျောက်တုံးများအနီးရှိမျက်ရည်များနှင့်အသည်းများကိုသင်၏လက်သည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်ကျောက်တုံးများနှင့်အသည်းများကိုဖယ်ရှားပါ။
Cuttlefish ကိုငါးတောင်းဖြင့်5ကီလိုဂရမ်ခန့်အကွာရှိ Viscera မှဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်, တောင်း5ကီလိုဂရမ်ခန့်သည်ပင်လယ်ပြင်တွင်လျှော်ရန်ပင်လယ်တောင်းတွင်ထည့်ပါ။
အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နိမ့်ကျခြင်း, အပူချိန် 40 ℃ခန့်အပူချိန်တွင်အပူချိန် 40 ℃ခန့်ရှိသည်။ အပူချိန်အလွန်အကျွံအပူချိန်, ၎င်း၏ပရိုတိန်း denaturation ကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်, တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့မှုကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ အပူစုပ်စက်ခြောက်သွေ့သောအခန်းတွင်အခြောက်လှန်းခန်းတွင်ဖြန့်ဝေနေသောလေထုပမာဏနှင့်လေတိုက်နှုန်းကိုတိုးပွားစေရန်အနုတ်ခံဖိအားပန်ကာကို အသုံးပြု. ခြောက်သွေ့သောအမြန်နှုန်းသည်ယူနီဖောင်းနှင့်နှေးကွေးသည်။
ကြီးမားသောပျံ့နှံ့နေသောလေထုပမာဏနှင့်လေတိုက်နှုန်းမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားခြင်းအခြေအနေအောက်တွင် cutttlefish သည်လေနှင့်အပြည့်အဝအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ cuttlefish ကြီးမားတဲ့အစိုဓာတ်သာမကအဆီဓာတ်တွေရှိပေမယ့်အဆီနှင့်အမဲဆီမှာလည်းရှိတယ်, cutttlefish ခြောက်သွေ့ခြင်း, များသောအားဖြင့်စိုစွတ်သော cuttlefish ၏အစာကျွေးသောပမာဏသည် 2-2.5 ကီလိုဂရမ်, ခြောက်သွေ့သော cuttlefish, ခြောက်သွေ့သော cuttlefish သည်ကောင်း၏, အရောင်တောက်ပသည်။ အကောင်းဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
အေးခဲနေသောငါးခြောက်စက် ငါးခန်းခြောက်စက် ငါး dehydrator စက်